Mianatra amin'ny fahatsapanao rehetra - ny tsapa 1000 ao Montessori
Sekoly sy akanin-jaza Montessori any Alemana
Ny pedagogy Montessori dia miverina, ankoatry ny zavatra hafa, mankany amin'ny pedagogue sy ny dokotera Maria Montessori. Teraka tany Italia izy tamin'ny 1870 ary avy amin'ny fianakaviana antonony. Tamin'ny fitaizana kristiana sy fitetezam-paritany dia nanolo-tena manokana ho an'ny zon'ny vehivavy sy ny zony manokana izy.
"Ampio aho hanao izany ho ahy", ilay foto-kevitr'i Montessori
Niasa tamina hopitaly izy niaraka tamin'ny ankizy sembana ara-tsaina, ary hitany fa vonona sy mahay mianatra izy ireo, fa ny hevitra marina mbola tsy hita hatreto. Maria Montessori dia namolavola fitaovam-pihetseham-po indrindra ho an'ireo ankizy ireo, izay nanampiany ny ankizy tamin'ny fivelarany. Miorina amin'izany, nipoitra ny pedagogy Montessori nandritra ny taona maro. Ny hevi-dehibe momba ny pedagogy iray manontolo dia ilay fitsipika mitarika malaza: Ampio aho hanao izany ho an'ny tenako!
Inona no ao ambadiky ny pedagogy Montessori?
Ny pedagogy Montessori dia mametraka ny zaza ho ivon'ny fampianarana, ny zaza dia mpanangana ny tenany ary ny antony manentana amin'ny endrika valisoa ary ny sazy dia tsy ilaina velively. Raha ny filazan'ireo mpanaraka an'i Montessori, ny ankizy dia te-hianatra avy ao anatiny ary mazoto ao anatiny satria ny eritreritra ny hampiditra ny tenany amin'ny tontolon'ny olon-dehibe dia tapa-kevitra. Miorina amin'ireto fiheverana ireto dia misy asa maimaim-poana sy fampianarana malalaka ao amin'ny leson'ny sekoly Montessori.
Ny lesona dia mamela ny efitranon'ny zaza hanaovana andrana sy traikefa. Ny fifantohana dia ny zaza amin'ny talentany, mamaritra izany ny fianarany ary mivoatra amin'ny gadona samirery. Fa kosa omena torolalana mba hanahaka zavatra fotsiny. Ao amin'ny akanin-jaza Montessori, ohatra, ny ankizy dia voatosika hametraka ny latabatra amin'ny fijerena azy hatrany hatrany ary te hanampy ny tenany amin'ny fotoana iray.
Ny pedagogy Montessori dia mizara telo ny fivelaran'ny zaza. Ny dingana voalohany amin'ny fahazazana (0-6 taona), ny dingana faharoa amin'ny fahazazana (8-12 taona) ary ny fahatanorana (12-18 taona). Ny fahatsapana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny dingana telo, satria ny ankizy dia manana faniriana voajanahary hanandrana, hikasika ary hamofona ny zava-drehetra.
Ny fahalalana ny hevitry ny teny ara-bakiteny dia hevitra fototra ao amin'ny sekoly Montessori sy ny akanin-jaza. Ny fianarana dia atao tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fahatsapana fa tsy amin'ny fomba mivaingana, ka izay nianarana dia tazonina tsara kokoa, hoy ireo mpomba an'i Montessori. Ny fitaovam-pianarana manokana dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ity fanamafisana ny fahatsapana ity.
Amin'ny matematika, ohatra, rojo perila dia ampiasaina hampazava ny isa, izany hoe azo tsapain-tanana. Ny bikan'ny vakana misy sombintsombiny 1000 dia tandindon'ny isa ambony kokoa ary avelao ny zaza haka sary an-tsaina ny habeny tsara kokoa - tsy amin'ny lohany ihany fa mahatsapa koa
Toeram-pitsaboana an-jatony maro any Alemana no miasa araka ny foto-kevitra Maria Montessori. Mahaleo tena ny ankamaroan'ny sekoly ary mametraka ny fampandrosoana ny zaza eo afovoan'ny tanjon'izy ireo. Ny ankamaroan'ny mpitsikera dia mahita fa manana olana ny tetezamita avy amin'ny sekoly ambaratonga fototra Montessori mankany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Na izany aza dia naseho taloha fa tsy manana olana amin'izany ny ankizy.
Ny atin'ny fandaharam-pianarana dia tsy mitovy amin'ny an'ny sekoly mahazatra, fa ny fomba ianaran'ny zaza ireo atiny ireo dia tena zava-dehibe. Ny asa maimaim-poana, ny safidin'ny mpiara-miombon'antoka, ny asa tarika, ny lesona misokatra miaraka amin'ny fotoana betsaka ahafahana mihetsika, ny fitantanananao fotoana manokana dia sasany amin'ireo lafin-javatra nipoitra tao amin'ny sekoly Montessori. Farany dia mahazo tombony amin'izany fepetra izany ilay zaza satria mianatra miasa tsy miankina.
Mianara tsara - sekoly sy fiainana
Mividy kitapo an-tsekoly | am-pianarana
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 3. March 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Fampianarana, akaninjaza & sekolyKeywords fampianarana, Montessori, Montessorischule, am-pianarana, karazana sekoly, Misafidy ny sekoly mety
indray Lahatsoratra taloha: Iza no biby tokony ho | fampianarana
more Lahatsoratra manaraka: Bilingual amin'ny akanin-jaza